Sida loo Abuuro Naqshad Websaydh La Heli Karo | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo abuuro naqshad la heli karo oo bogga ah
Susana Do Carmo | | Naqshadeynta Webka
Dukaammada internetka, codsiyada bangiyada, boos celinta hoteelka ama shaqooyinka madaxa bannaan, iyo in ka badan hawlaha ka socda internetka taasna waxay bedeshay mararka qaarkood, warbaahinta caadiga ah.
Este kororka degdegga ah ee howlaha dijital ah ayaa noo fududeeyay dhinacyo badan nolosha. Waxay naga badbaadinaysaa waqti maadaama macaamilku dhaqso badan yahay loomana baahna in la aado xarun jir ahaaneed, dabcan, waxaa la abuuray warbaahin cusub oo aan horey u jirin iyo in hadda dadka intiisa badani ay isticmaalaan, sida shabakadaha bulshada, filimada qulqulka iyo taxanaha barnaamijyada sida Netflix, ama nidaamyada lacag bixinta ee internetka sida Paypal.
Kordhinta adduunka dhijitaalka ah waa lagama maarmaan maalgeliyo horumarinta is-dhexgalyada la heli karo oo si wanaagsan loo qaabeeyey Loogu talagalay dadka isticmaala. Si kastaba ha noqotee, ma ilaabi karno taas waxaa jira isticmaaleyaal la ildaran naafonimo jireed ama maskaxeed oo si weyn u xaddidaya khibradooda iyo awooddooda isticmaalka kombuyuutarrada iyo taleefannada gacanta.
In kasta oo ay jiraan xoogaa naafo ah, sida dadka isticmaala kuraasta curyaamiinta, oo aan faragelin isticmaalka internetka, kuwa kale, sida dhibaatooyinka aragga ama indho la'aanta, dhibaatooyinka isku-dubbaridka mootooyinka, dhago la'aanta, ama autism, waxay si dhab ah u carqaladeyn karaan awoodda aad u leedahay inaad ku dhex wareegto shabakadda. Xaaladahan, qaarkood horay ayaa loo abuuray qalabyada sida akhristayaasha shaashadda, kuwaas oo caawiya oo taageera dadka isticmaala meelaha naafada ah.
Laakiin tani waa qaybta koowaad ee xallinta dhibaatada. Ka fikirida isticmaaleyaashan, waa inaan naqshadeynta websaydhyada taas oo kuu sahlaysa khibradaada iyo ku habboon baahiyahaaga. Waxaa jira mabaadi'da qaar markii la qaabeynaayo oo aan codsan karno.
1 Mawduuca iyo ilaha
2 Qoraal kale
4 Iswaafaqsanaanta qaabeynta
5 Wareegtada kiiboodhka
Mawduuca iyo ilaha
Laga bilaabo tan aasaasiga ah, waa inaad dejiso mudnaanta naqshadeynta waxyaabaha. Madaxa iyo baarka menu waa inay ahaadaan kuwo muuqaal ahaan si fudud loo arki karo waana inay ahaadaan waxa ugu horeeya ee isticmaalehu arko. Waxyaabaha ku jira bogga guriga, sawirrada iyo macluumaadka la xiriira ayaa noqon doona kan labaad ee la helo.
Xayeysiiska ama boorarka xayeysiinta ayaa ka muuqda bogag badan. Hadday laf ahaantiisu tani dhib ku tahay dhammaan isticmaaleyaasha, kuwa indhaha naafada ka ah waa dhibaato tan iyo markii ay keento jahwareer badan, oo ay farageliso akhriska jaantuska shabakadda. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad abuurto a nashqadeynta guud ee bogga in uu yahay abaabul macquul ah waana la fahmi karaa, walxahana waa loo cabiray si ku habboon, sidaa darteed xitaa haddii ay jiraan waxyaabo kale oo jeedinaya, dadka isticmaala ay xoogga saari karaan waxyaabaha muhiimka ah.
Xarfaha aad isticmaasho doorbidayaa waa inay ahaadaan weyn oo la akhrin karo. Nooca Sans serif iyo geesinimo Waxay u fududeeyaan akhriska dadka laga yaabo inay ku dhacaan cudurka dyslexia. Noocyada kale ee lagu taliyay waa: Arial, Times New Roman, Helvetica, Tahoma, Calibri, iyo Verdana.
Dabcan, waa inaad marwalba taxaddartaa inuu jiro kala duwanaansho cad oo udhaxeeya qoraalka iyo asalka. Ha isticmaalin midabbo la mid ah, ka doorbid halkii midabada iska soo horjeedda.
Isticmaalidda xarfaha 'Sans Serif Bold' ayaa u oggolaanaya muuqaal fiican oo qoraalka ah.
El Qoraalka Beddelka ah ama Alt Tag, waa tilmaanta lagu dhejiyay sawirrada bogagga shabakadda. In kasta oo qoraalkan aan loo heli karin adeegsadayaashu inay akhriyaan, a sharaxaad wanaagsan oo qoran waa aalad inaga caawineysa inaan gaarno meeleynta SEO-ga ka wanaagsan.
Laakiin waxtarka Alt Tag intaas kuma eka. Kuwaas isticmaalayaasha isticmaalaya akhristayaasha shaashadda xagga aragtida daciifka ah, sharraxaadda sawirradu waa tixraaca kaliya ee ay leeyihiin inay ogaadaan waxa muuqaalku yahay wixii ku soo shaacbaxay bogga. Markaa haddii aan meel dhigeyno, tusaale ahaan, sawirrada qaar ka mid ah kuwa wax qabta, qoraal beddel wanaagsan ayaa noqon lahaa: Seddex geed oo nafaqo leh oo ku jira dheryaha casaanka. Qoraal aad u gaaban sida: Dhirta la shiiday, Ma aha sharaxaad bixineysa faahfaahinta la xiriirta sidaas darteedna ma shaqeynayso.
Seddex geed oo nuxur leh oo ku jira dheryaha casaanka ah. Tusaale qoraal kale ah.
Markii aan naqshadeynayno sidoo kale waa inaan tixgelinno dhammaan bandhigyada lagu soo bandhigi doono, midkoodna nooca webka ama mobilka. Khibraddu had iyo jeer way ka duwanaan doontaa iyadoo kuxiran heerka dhexdhexaadka ah ee aan ka daawaneyno.
Markaan isticmaalno mobilka, waxaynu la kulmi karnaa deegaanno kala duwan taas oo ka dhigaysa akhriska mid adag Mawduucan shaashadda. Haddii aan nahay bannaanka tusaale ahaan, iftiinka qorraxdu wuxuu ka dhigayaa shaashadda mid aad u madow, sawaxuna nama ogolaanayo inaan si fiican u maqalno codka. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in si taxaddar leh looga fikiro faahfaahintaan, si nooca mobiilku uu u leeyahay xarfo waaweyn iyo midabyo mugdi ah, fiidiyowyaduna waa inay lahaadaan subtitles haddii ay adkaato in la maqlo.
Laqabso naqshadeynta isdhexgalka si ay u aqrin karto taleefannada gacanta iyo kombiyuutarada.
Naqshadaynta tifaftirka waxa aan ku sameyno degelkeena waa inuu ahaadaa isku mid iyadoon loo eegin qaybta halka aad joogto Isla astaamaha bar menu waa inay ka muuqdaan qaybta Guriga sida qaybta Xiriirada. Waa inaanan badalin qaabka iyo meesha ay ku yaalliin badhannada furaha websaydhka.
Sidoo kale naguma habboona inaan dhigno fiidiyowyo si toos ah u ciyaara markii la furayo bogga. Isticmaalayaasha adeegsanaya akhristayaasha shaashadda, way adag tahay in la ogaado sida loo joojiyo.
Baarka menu-ka ee ku yaal bogga Starbucks waa isku mid dhammaan qeybaha.
Ugu dambeyntiina, qaar ka mid ah dadka isticmaala dhibaatooyinka isku-duwidda mootada ayaa dhib ku qaba inay qabsadaan jiirka kumbuyuutarka ama adeegsadaan taabashada laptop-ka, waxayna ku tiirsan yihiin oo keliya kumbuyuutarka Hubso inaad in websaydhkaaga loo qaabeeyey qaab taasi waxay noqon kartaa gabi ahaanba shaqeynaya oo keliya badhamada kiiboodhka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Sida loo abuuro naqshad la heli karo oo bogga ah